တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ နည်းပညာတွေကြောင့် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေကလည်း အောင်မြင်လျက်ရှိပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ အချိန်မှာ အလှအပဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှမကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အချို့ချို့သော ယောက်ျားလေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး သဘာဝမျက်နှာထက် ပိုလှသွားအောင် မျက်နှာပြုပြင်ခြင်းကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ နည်းပညာနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေ အောင်မြင်လာတော့ မလှဘူးထင်တဲ့ မျက်နှာရုပ်သွင်ပြင်ကို လှအောင်၊ လှတဲ့ရုပ်သွင်ပြင်ကို ပိုလှသွားအောင် ပြုပြင်ပုံသွင်းနိုင်တဲ့ ဆေးခန်းတွေကလည်း ရှိနေပါပြီ။
မျက်နှာသွင်ပြင်ပုံသဏ္ဍာန်က လေးထောင့် ကျနေလို့၊ မျက်နှာဝိုင်းနေလို့ မလှဘူးထင်သူတွေ၊ နှုတ်ခမ်းက ပါးပါးလျလျနဲ့မို့ နှင်းဆီငုံ နှုတ်ခမ်းလို ဖူးဖူးအိအိလိုချင်သူတွေ၊ ဇရာအစပြုလို့ မျက်နှာမှာ အရေး အကြောင်း ပေါ်လာလို့ စိတ်သောက ရောက်နေသူတွေ၊ မေးလေးသွယ် ချင်သူတွေ၊ နှာတံမပေါ်လို့ ပြု ပြင်ချင်သူတွေအတွက် မျက်နှာခွဲစိတ် ပြုပြင်တဲ့နည်း Plastic Surgery နဲ့ မလုပ်ရဲရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ အလှအပကို ပုံဖော်ပေးနိုင်မယ့် နည်းကတော့ ဖြည့်ဆေး (Filler) ထိုးခြင်းပါပဲ။
အခုနောက်ပိုင်း အလှအပပြု ပြင်ရေးမှာ Filler ဖြည့်ဆေးထိုးတာက အချိန်သိပ် မကုန်သလို လိုချင်တဲ့ရလဒ်လည်း မြန်မြန်ရတာကြောင့် Filler ထိုးခြင်းကို ပိုပြီးအာရုံထားလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Filler ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ထိုးတော့မယ်ဆိုရင် Filler နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။
Filler ဆိုတာ ဘာလဲ?
Filler လို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက မျက်နှာပြင်အသားအရေ မညီညာတာ၊ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်နေတာ၊ ဝက်ခြံကြောင့် အမာရွတ်ချိုင့်ခွက်တွေ ဖြစ်နေတာ၊ အသက်ကြီးလို့ ပါးရေ၊ နားရေတွေ တွန့်လာတာကြောင့် နုပျိုတဲ့ အသားအရေကို ဆုံးရှုံးမသွားရအောင် မျက်နှာ၊ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်၊ ပါး၊ မေးရိုး၊ နှာတံ၊ နှုတ်ခမ်း စတဲ့ နေရာတစ်ဝိုက်က အရေပြားအောက်ကို ဂျယ်လီလို အရည်တစ်မျိုး ထိုးပြီး တင်းရင်းညီညာချောမွတ်တဲ့ အသားအရေနဲ့အတူ နုပျိုမှုတွေ ပြန်ရလာလို့ filler ကိုထိုးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Filler အမျိုးအစားတွေက ဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲ?
Filler ကို ထုတ်တဲ့နေရာမှာ သဘာဝကုန်ကြမ်းတွေကနေ ထုတ်တာနဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းကထုတ်တာဆိိုပြီး ထုတ်တဲ့ အခြေခံ ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစား (၄) မျိုးလောက်ရှိပါတယ်။
ဒီဆေးကတော့ အသုံးအများဆုံး Filler ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဓာတ်မို့ ဓာတ်မတည့်တာ ရှားတဲ့အတွက် အသားအရေက အလွယ်တကူ လက်ခံပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ကရတဲ့ ကိုလဂျင်ကို သန့်စင်ပြီး ထုတ်ထားတာပါ။ သူက ထိုးပြီးကာစမှာ အရမ်းလှပပြီး ရလဒ်ကောင်းပေမယ့် ကြာကြာမခံပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့် Allergy ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
သဘာဝကုန်ကြမ်းက ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ဓာတ်ခွဲခန်းက ထုတ်ထားတဲ့ Filler ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အားသာချက်က ကြာရှည်ခံပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း ပိုများပါတယ်။ ခဏခဏ ပြန်မထိုးချင်တဲ့သူတွေ အသုံးများတဲ့ Filler ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိခန္ဓာကိုယ်က အဆီ သို့မဟုတ် သွေးရည်ကြည်ကို ထုတ်ကာ ပြန်လည်သန့်စင်ပြီးမှ လိုတဲ့နေရာကို ပြန်ထိုးတာပါ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က အရာကိုထုတ်ယူပြီး ပြန်ထိုးတာကြောင့် ဓာတ်မတည့်တာမျိုး ရှားပါတယ်။ အဆီကို တင်ပါး၊ ဗိုက်နဲ့ ပေါင်စတဲ့ အဆီများတဲ့ နေရာကနေ ထုတ်ယူရတာပါ။ သူက ကရိကထများသလို အကုန်အကျလည်း များပါတယ်။
Filler ကို မျက်နှာမှာ အထိုးအများဆုံးဖြစ်ပြီး နဖူးအရေးအကြောင်းပေါ်ရင်၊ နှာတံချိုင့်ရင်၊ မျက်ခွံတွဲကျရင်၊ မျက်နှာ အရေးအကြောင်းပေါ်ရင်၊ ပါးချိုင့်ရင်၊ မေးချွန်ပြီး V Shape ဖြစ်ချင်ရင်၊ နှုတ်ခမ်းလေးပြည့်ဖောင်း တင်းရင်းချင်ရင် ထိုးလို့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နားထင် ချိုင့်ရင်၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်အချိုင့်တွေနဲ့ ရင်သား၊ တင်ပါးကြီးချင်ရင်လည်း ထိုးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဖြည့်ဆေးထိုးလိုက်တဲ့အခါ လိုတဲ့နေရာတွေ တင်းရင်းပြည့်ဖောင်း ညီညာကာ ပိုကြည့်ကောင်းသွားပါတယ်။
Filler ထိုးတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးကတော့ ကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီး အတွေ့အကြုံ ပြည့်ဝတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ ထိုးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ထိုးပုံအဆင့်ဆင့်ကတော့ အရင်ဆုံး ဆရာဝန်က ထိုးမယ့်နေရာကို အရှေ့ဘက် ဘေးဘက်သေချာကြည့် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး Filler ထိုးမယ့်နေရာကို အမှတ်အသား လုပ်ပေးပါတယ်။
ပြီးရင် မျက်နှာကိုသေချာ သန့်စင်ဆေးကြောပြီး ထုံဆေးထိုးတာ ဒါမှမဟုတ် လိမ်းတာ အရင်လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးမှ အပ်အချွန် (Needle) သို့ အပ်အပျော့ (Cannula) နဲ့ လိုတဲ့နေရာကို ဖြည့်ဆေးထိုးပြီး ပြေပြစ်အောင် နှိပ်နယ်ပေးကာ ပုံသွင်းရပါတယ်။ ပြီးရင် အနေအထားပြန်ကြည့်ပြီး လိုရင်ထပ်ထိုးရပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ပုံရပြီဆိုရင် ပြန်သန့်စင်ပြီး ရောင်တာ၊ နီတာနဲ့ နာတာသက်သာအောင် ရေခဲကပ်ပေးရပါတယ်။ ဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး (၆) လကနေ (၁) နှစ်အထိ ခံပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ တချို့ဆေးတွေဆို (၂) နှစ်လောက်ထိ ခံပါတယ်။
Filler ထိုးပြီးရင် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်
Filler ထိုးပြီးတဲ့အခါ ပုံမှန် လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်သလို မိတ်ကပ်လည်း လိမ်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရောင်ခြည် ပြင်းပြင်းအောက် အကာအကွယ်မပါဘဲ ထွက်တာရှောင်ပါ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ရှားတာ၊ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာမျိုးတွေကို ရှောင်ပါ။ အသားယားယံစေတတ်တဲ့၊ ဓာတ်မတည့်တဲ့ အစားအစာတွေကို လုံးဝမစားရပါ။
Filler ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ?
ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ သွေးခြည်ဥတာ၊ နီရဲတာ၊ ရောင်ရမ်းတာ၊ ယားယံတာနဲ့ နာကျင်တာတွေက ပုံမှန်အနေနဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖုအသီးလေးတွေ ထွက်လာတာ၊ အနာကျက်နှေးတာ၊ မကျက်တာနဲ့ အသားပုပ်တာ၊ ဓာတ်မတည့်တာမျိုးဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ပြန်ပြပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုထုံးကိုခံယူသင့်ပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ အသားပုပ်တာပါ။ ထိုးဆေးက သွေးကြောထဲဝင်ပြီး သွေးကြောပိတ်ပြီး အသားပုပ်တာ၊ မျက်စိသွေးကြောထဲဝင်ပြီး မျက်စိကွယ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တာမို့ အထူးသတိပြုရမှာပါ။ ဖြည့်ဆေးထိုး နေချိန်မှာ အရမ်း စူးအောင့်နာလာရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောရမှာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ ဖြည့်ဆေးထိုးပြီး
နောက်ရက်မှာ အသားညို မည်းမည်းဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန် ပြန်ပြကြဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ဒါမှဖြေဆေးကို အချိန်မီထိုးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးသတိပေးချင်တာကတော့ Filler အပေါ် အရမ်းစိတ်စွဲလမ်းတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ Filler ထိုးပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားမတိုင်မီ Filler ကိုပြန် ထိုးတာမျိုး ရှောင်သင့်ပါတယ်။